musha More Formula One Drivers Bio Lando Norris Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Lando Norris Biography inoratidza Chokwadi nezveNhau yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki - Adam Norris (Baba), Cisca Norris (Amai), Musikana / Mukadzi kuve, Mararamiro, Hupenyu hweMunhu uye Net Worth.
Nemashoko akapfava, tinokupa iwe nerwendo rwehupenyu hwemujaho, kubva pakukura kwake kusvika paakava nemukurumbira.
Kuti akudze chishuwo chako chehupenyu hwehupenyu, heino hujaya hwake kusvika kune vanhu vakuru gallery - sumo yakakwana kune yedu vhezheni yeLando Norris 'Biography.
Lando Norris Biography, Tarira Hupenyu hwake uye Rise nyaya.
Hongu, munhu wese anoziva nezvehunyanzvi hwake hwekutyaira hwakamubatsira kupedza kechitatu mu2021 Monaco Grand Prix. Nekudaro, vashoma chete vadikani vemijaho ina-mavhiri vakaverenga pfupi pfupi Biography pamusoro paLando Norris.
Chikwata chedu chakagadzirira memoir inobata pamusoro pake yaungawana ichifadza. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Lando Norris Zvekuchecheche Nyaya:
Kune vatangi veBiography, vateveri vake vanofarira kumutumidza zita rekuti 'Last Lap Lando'. Zvisinei, zita rake chairo rinosara Lando Norris.
Akauya munyika ino pazuva regumi nematatu raNovember 13 kuna baba vake vakapfuma, Adam Norris naamai, Cisca Norris muBristol, England.
Lando aive wechipiri pavana vana vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, inoratidzwa pazasi.
Sangana nevabereki vake; Adam Norris naCisca Norris. Chokwadi, imhuri huru imwe.
Sezvineiwo, mazuva ake ekutanga akashongedzwa nehupenyu hwoumbozha. Sezvaitarisirwa, vabereki vakapfuma vaLando vakave nechokwadi chekuti aive nematoyi ese achangoburwa uye kufona.
Somukomana mudiki, ramangwana mujaho aifarira kutamba mitambo yemavhidhiyo. Aive akaparadzaniswa kubva pakunyaradza kwake panguva yehudiki hwake.
Lando Norris akanakidzwa nehudiki hwakanaka muguta reChirungu reBristol. Akakurira pamwe chete nemukoma wake, Oliver, uye hanzvadzi diki, Flo naCisca.
Pamwe chete, mukoma nomunun’una vakanakidzwa nenhambo dzisingakanganwiki dzakasimbisa chisungo chavo.
Mumakore ake ekutanga, Norris aitarisa kuna baba vake sezvaizoita vana vazhinji. Aive neshungu dzekukunda harahwa yake mune zvese zvehupenyu.
Panguva yaakavhara 5, mutambi wechidiki akange atanga kukwikwidza nababa vake mumutambo weGran Turismo.
Zvinosekesa zvakaringana, pfungwa dzake dzehudiki dzaive dzisiri hunyanzvi hwekurova baba vake mumutambo wevhidhiyo wemujaho.
Aisaziva kuti kukwikwidza kwake kwaaiita nababa vake kwaizomutsa hunyanzvi hwake hwemumhanyi uhwo hwanga huchivavarira kuvharwa.
Lando Norris Mhemberero Yemhuri:
Weramangwana mujaho aive akasununguka paudiki. Kuzvarwa mumhuri yakapfuma kunotsikisa chokwadi chekuti Norris aisazoshaya chero chinhu. Sezvakatarisirwa, vabereki vake uye vanun'una vakamuratidza rudo rwakanyanya uye rudo.
Kutenda kumhuri yake, Norris haana kukura semwana akatyoka aine mavanga akawanda uye zvinosuwisa kumashure.
Sezvineiwo, imba yake ndeimwe yevakapfuma vanhu muBristol pamwe ne501st-vakapfuma muEngland.
Unoziva here?… Mutambi weramangwana akakurira pedyo nevatyairi veFormula 1 vane mukurumbira. Takamuona achigovera dzimwe nguva dzisingakanganwiki neane mukurumbira wekuGerman prodigy, Sebastian Vettel.
Musangano Sebastian chiratidzo chekuti aizove neramangwana rakajeka muF1.
Lando Norris Mhuri Kubva:
Mudiki ane dzinza remarudzi akawanda. Madzitateguru ake aamai ndiBelgian, nepo kwaakabva kwababa vake vari veBritain nhaka.
Pamusana pemabviro maviri akasiyana evabereki vake, Norris iye zvino ane hukama huviri neEngland neBelgium.
Amai vake vanobva kuFlanders - iyo inotaura chiDutch kuchamhembe kweBelgium. Chii chimwezve?… MaFlanders ane iyo yakareba tambo yetram munyika. Iyo inoyevedza 68 km track inzira yakanaka yekutenderera matombo anokosha ezviuru zveNorth Sea.
Mepu yemutauro inoratidza iro dzinza muBelgium.
Lando Norris Dzidzo:
Mutyairi aitarisirwa paakasvika zera, vabereki vake vakamunyoresa kuMillfield School muSomerset.
Norris zvaakaramba achishanda pamabasa ake ezvidzidzo, akateererawo kumakwikwi eMotoGP.
Chiono chemuchadenga che Millfield Chikoro uko Norris akatanga kudzidza kwake kwekutanga.
Kare kumashure, akafunga Valentino Rossi semunhu anonakidza kumhanya kutevedzera. Vabereki vake pavakaona kuti haasi kutora zvidzidzo zvake zvakanyanya, vakamuita kuti arege chikoro kunodzidza pasi pemurairidzi wega.
Kunyangwe mhuri yake yakatendera kufarira kwake mujaho, ivo vaida kuti Norris awane dzidzo chaiyo.
Iwe unogona kunge usingazivi kuti mutambi wacho haana kutora GCSE yake asati abuda kuti adzidze masvomhu nefizikisi nemurairidzi wake wenguva yakazara.
Lando Norris Bio - Hupenyu hwepakutanga muMotorsports:
Mune feat yekubatsira anovimbisa mujaho kuzadzisa vavariro yake, mhuri yake yakatamira kuGlastonbury. Ikoko, aive nenguva yakakwana yekudzidza nekuteedzera basa reroto rake.
Sezviri pachena, biography yake yaive nekamwe kakumonyoroka. Heino chokwadi; Norris aida MotoGP asi akatanga basa rake remujaho mujaho rekarting.
Kare kumashure, 7-year-old aigara achikwikwidzana nemukoma wake mukuru, uyo akanga atova pro mumitambo yakadaro.
Kunyemwerera kwake kunoratidza kufara kwake kukwikwidzana nemukoma wake mukarting.
Pane rimwe zuva rakatendeka, Norris naOliver vakaperekedza baba vake kuzoona kutenderera kweSuper 1 National Kart Championship.
Panguva yemutambo, akazofunga kuisa pfungwa dzake pamujaho wemavhiri mana, waanoona achikwikwidza kupfuura mavhiri maviri.
Nekudaro, akachinja kufarira kwake kuFormula 1 uye akashanda nesimba kuti awane kukosha mumutambo.
Pa13, akatora chikamu mu2013 World Karting Championships yakaitirwa muBahrain. Ikoko akahwina CIK-FIA European uye Supercup mazita pamwe neWSK Euro Series.
Akakunda iyo Nhoroondo ye WSK Euro Series pakutanga pane chero munhu anga akatarisira.
Lando Norris Biography - Mugwagwa Wemukurumbira Nyaya:
Muna 2014, nyika haina kukwanisa kuramba tarenda rake rinoshamisa mujaho. Sekufanirwa kwaizove nazvo, Norris akazviratidza zvakare semuzita rekukunda nekuhwina iyo CIK-FIA KF World Championship.
Akange akakurudzirwa mushure mekukunda mukurumbira pazera diki.
Izvi zvakamuita iye semudiki mukarting mukwikwidzi wepasirose kuhwina kubva muna 2014. Kuve mudiki zvakanyanya aine akawanda anovimbisa maficha, akawanda zvikwata akatanga kuratidza chinangwa chavo chekuisa chisungo naye.
Mushure mekutora zita reEuropean Formula 3 muna 2017, Norris akazosaina chibvumirano nechikwata cheBritish mota remujaho, McLaren.
Izvi zvinoratidza budiriro huru yebasa rake uye zvakamukurudzira kupinda mumakwikwi eFormula 1.
Kutanga kwemambakwedza matsva echikwata cheMcLaren naNorris.
Lando Norris Bio - Kubudirira Nhau:
Sezvaitarisirwa, akatanga semutyairi mudiki kuna McLaren. Pazuva rechipiri rekuyedzwa, Norris akagadzika lap yechipiri inokurumidza paHungaroring. Rekodhi rake rakamukurudzira kuti ave bvunzo yepamutemo uye chengetera mutyairi weMcLean mumwaka wa2.
Gore ra2020 rakamuona akanamira pane yake yekutanga-yekutanga Formula 1 podium. Norris akazadzisa ichi feat mushure mekukwidziridzwa kubva pa4 kusvika kunzvimbo yechitatu mu3 Australia Grand Prix. Nekudaro, akave weBritish mudiki kumira paFormula 1 podium munhoroondo.
Muna 2021, akapedza nzvimbo yechitatu muEmilia Romagna Grand Prix uye akazviita kune yake yechipiri nhanho muF3.
Mushure mekuisa chisimbiso chakawedzerwa chemakore mazhinji naMcLaren, Norris akasimudza chiratidzo chinoshamisa mu2021 Monaco Grand Prix. Akapedza wechitatu kuseri kwaCarlos Sainz uye Max Verstappen pakupera kwemutambo.
Nekudaro, kubudirira kwake kwakamuwanira podium yechitatu yebasa rake muFormula 3 - chimwe chinhu chinoreva zvakawanda kune mumwe wake wechikwata (Daniel Ricciardo) Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Lando Norris Musikana Wemusikana:
Ehezve, kuwedzera kwake mukurumbira kwakaita kuti vateveri vabvunze nezve ngoro yake. Kuziva kwavo nezve hupenyu hworudo hwaNorris kunoramba huripo sezvo asina kutumira chero mufananidzo wemukadzi padivi pehanzvadzi yake (Flo) paInternet.
Mukadzi wekurota kwake anoramba ari chakavanzika pasirese.
Mushure mekuita nzvero yakakwana, takaona kuti mujaho uyu haana kuroora kubva muna 2021. Kuita kuti zvinhu zvinyanye, Norris akatobvuma kune chokwadi chekuti anofarira kushandisa nguva ari ega.
Nekudaro, haasati ave nechokwadi chekuti aizozviwanira iye musikana riini. Kunyangwe pandinonyora iyi Bio, mhuri yake iri kunetsekana nezvehukama hwake. Zvichida pfungwa yekuroora haina kumbobvira yaenda mundangariro dzake panguva ino.
Lando Norris Hupenyu hweMunhu:
Kune zvakawanda zvakanaka zvinoverengeka zvezvinhu zvinopa humbowo chaihwo hweye Scorpio zodiac maitiro. Iye anoda chinzvimbo, akashinga, akavimbika uye akatsunga kuve akagwinya pane zvaanoita.
Kure kure nekumhanya, Norris akawedzera ruzivo rwake mune mimwe mimwe mitambo. Ehe, iye akanaka pakutamba kiriketi uye anowanzo bata bat kana pese paanenge asina kubatikana.
Sezvineiwo, akatanga kudzidza kutamba gorofu muna 2021. Edza kumurova pakati pe1 kusvika 10 mushure mekutarisa hunyanzvi hwake segorokie rookie muvhidhiyo pazasi.
Chimwe chinhu chinonakidza nezvehunhu hwake hunhu hwake hwekuseka. Iwe unogona kupedzisira watsemuka mbabvu dzako mushure mekuona dzakanakisa nguva yake nevamwe vanhu.
Mararamiro Echokwadi Uye Net Kukosha:
Kusvika pakuziva Mararamiro aLando Norris kwaizokubatsira kuti uwane maonero akajeka emararamiro ake.
Kunyangwe achiwana mari yakawanda kubva mukuedza kwake, mujaho haaratidzi mararamiro emufaro.
Pasina kukahadzika, iye anokwanisa kuwana kune akasiyana mabrandi emabhiza anodhura. Zvisinei, kuzvininipisa kwake kwakamukurudzira kuti afambe-fambe mumigwagwa pane imwe nguva muhupenyu hwake.
Mutambi akanaka anowanzo famba mumigwagwa kunyangwe aine akati wandei.
Nemari inofungidzirwa yeNet Worth ye $ 3 miriyoni, Norris anogona kutenga imba yakanaka uye zvimwe zvinhu zvepamusoro. Kunyangwe zvakadaro, haana kutora hanya nehupenyu hwekunze hwakawanda mamwe ma celebs anozvirumbidza pasocial media.
Lando Norris Mhuri:
Iyo nzira yekuenda kune stardom ingadai isina kunakidza pasina rubatsiro rwemhuri yake yese. Nekudaro, isu tinopa zvimwe zvinonakidza chokwadi pamusoro pababa vake, amai, mukoma, uye hanzvadzi muchikamu chino.
Nezve Lando Norris 'Baba:
Adam Norris ndiye akanyanya kupora baba veFormula 1 mutyairi. Ndiye mhando yababa vanofarira kuve nevanakomana vavo vakamukomberedza pese paanoona mimwe mitambo.
Unoziva here?… Baba vaNorris vari panhamba 18 pane 2016 Bristol runyorwa rwevanhu vakapfuma. Kare kumashure, aive nefungidziro yehupfumi hwake hwemamirioni mazana mairi mazana maviri nemashanu.
Norris anogovera nguva yemoyo nababa vake. Iwe haungatende kuti murume uyu wauri kuona ari mamioneya.
Mr. Adam Norris vakave maneja maneja wePension Direct (bhizinesi repenjeni rakapinda mu HL) pamakore makumi matatu nematatu. Mushure memakore matatu ekushanda nesimba, akasiya basa musangano.
Nekutenda, aive avaka imwe yeanonyanya kubudirira mapensheni kuraira kumisikidzwa mubhizinesi asati aenda pamudyandigere. Parizvino, anoramba ari imwe yedzidziso dzisingazungunuke dzekubudirira kwaNorris.
Nezve amai vaLando Norris:
Pese paanozvarwa mwana, amai vake vanoshuvira zvakanyanya kuti ararame hupenyu hunofadza uye hune hutano. Ehe, amai vaNorris havana kumbosiyana nevamwe vakadzi. Hongu, Mai Cisca Norris havafarire kuona vana vavo vachikuvara.
Chii chaangave ari kutaura kuna amai vake kuti vaseke zvakanyanya kudaro?
Chido chake chikuru kwavari kuve nehupenyu hwakanaka. Nekuda kwehunhu hwake hune hanya, Cisca anowanzo chengetedza kuti atarise pamwanakomana wake nguva nenguva. Akatodonhedza misodzi yemufaro paakaziva nezve chibvumirano chaNorris naMcLaren.
Nezve Lando Norris 'Vakoma:
Sekureva kwake peji rewiki, wechidiki mukurumbira ane hanzvadzi mbiri diki, Flo naCisca, pamwe nemukoma mukuru, Oliver. Kunyangwe Lando asingataure zvakawanda nezvake, tamuona achiisa pikicha nehanzvadzi dzake.
Nguva yekufara yakagovaniswa nemhuri yake yaanoda. Chokwadi, hanzvadzi dzake dzakanaka chaizvo.
Iye mukoma mukuru ndiye mumwe wevanonyanya kukurudzira. Muchokwadi, Oliver aive achishingawo mumutambo wekarting paakange achikura. Anowanzo dzidzira nehama yake diki kuti imubatsire kuve nani zvakanyanya pamutambo.
Sangana naOliver, mukoma akanaka munin'ina waNorris.
Nezve hama dzaLando Norris:
se Lewis Hamilton, iyo F1 prodigy inoratidza kunetsekana kwakakosha kwemhuri yake yakatambanudzwa. Akambogadzira ngowani yake mutero kuna mbuya vake.
Ehezve, dai vanasekuru vake vaive vapenyu, vaizodada nezvaakaita. Pandinonyora iyi Bio, panga pasina ruzivo nezve babamunini vake natete pa internet.
Lando Norris Untold Chokwadi:
Kuunza hupenyu Hwedu Hupenyu Nyaya, hezvino zvishoma zvinoitika zvingakubatsira iwe kuti unzwisise zvirinani nezvehupenyu hwake.
Chitendero cheLando Norris:
Akazvarwa kumhuri inobata rukudzo rukuru pakutenda kwavo kwechitendero. Sezviri pachena, Norris nemhuri yake yese maKristu. Ehe, ivo vanoshingaira mukutevera dzidziso dzekutenda kwavo.
Lando Norris Anoyamwa paBhora:
Kunyangwe paane hunoshamisa hunoshamisa, iyo Fomula 1 genius haina tarenda munhabvu. Takamuona achiita imwechete kana mbiri dzekutamba nebhora. Asi kubva pakuonekwa kwezvinhu, hunyanzvi hwake hwakaita kunge hwakawanda senge mutambo wekusetsa.
Lando Norris Tattoos:
Panguva yekutsikisa iyi Bio, Norris haana kuratidza kufarira hunyanzvi hwemuviri. Kunyangwe hazvo akarekodha zvakawanda zvakaitika munhoroondo, anofarira kunyora pasi zviitiko zvakakosha zvakadaro mudhayari rake. Nekudaro, haana kunyorera tattoo pamuviri wake panguva ino.
Lando Norris Pfupiso yehupenyu:
Tafura iri pazasi inoratidza ruzivo rwakajeka nezve mutyairi, Lando Norris. Iyo inokupa iwe rombo rakanaka kuongorora kuburikidza neprofile yake nekukurumidza sezvazvinogona.
Zita rizere: Lando Norris
Zita rekudanwa: Yekupedzisira Lap Lando
Nzvimbo yekuzvarirwa: Bristol, England, United Kingdom
Baba: Adam norris
Amai: Cisca Norris
Hanzvadzi konama: Oliver Norris
Sisters: Flo naCisca Norris
Musikana: N / A
Net Worth: $ Miriyoni 3
Hobbies: Cricket, Kushambira, gorufu
Citizenship: Kuva Nenyika Dzevaviri (England neBelgium)
kukwirira: 1.7m (5 ft 8 mukati)
Kunyange zvazvo zvichiita sezvisingabviri kuti vechidiki vakwanise kuita zvakanaka, Lando Norris akaita zvakasiyana. Zvaive zvakanaka kuti akatsanangura basa raaida kuita kubva pakukura kwake.
Zvichida kuziva kwake kwepakutanga ndeimwe yemakiyi akatungamira mukubudirira kwake. Zvakare, baba naamai vaNorris vakaita chikamu chakakosha mukukura kwake kwehudiki. Vakamubatsira kukudziridza kugona kwake kuti ave mutyairi akanaka.
Sezvenguva yekugadzira iyi Lando Norris Bio, kunyora chibvumirano chitsva cheMcLaren anga atopfuura.
Ehezve, mhuri yake yaifunga kugara zvakanaka kwake uye basa rake kubudirira pamberi pechinhu chero chipi zvacho. Nekudaro, vakaisa nguva yavo nemari kuti vamuone achizadzisa zviroto zvake.
Hatingakanganwi kutaura nezvaOliver, mukoma wake, uyo akatanga kumudzidzisa mumujaho wekart. Chokwadi, kubudirira kwake chiratidzo chekudyara kwese kwakaitwa nememege muhupenyu hwake. Tinotenda nekuverenga yedu Lando Norris Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi.